२३ गतेको संसद बैठकमै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तीन दलबीच सहमति, नयाँ प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नाम ! – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: २:३७:०६
काठमाडौं, १९ फागुन । यही फागुन २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा दाहाल नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले राजीनामा नदिने बरु संसदमै फेस गर्ने बताईरहेको बेला यता तीन दलबीच भने उनलाई हटाउनको लागि नयाँ सहमति बनिसकेको छ । आजमात्रै चितवनको एक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले आफूले सत्ताको भाग नखोज्ने तर जिम्मेवारी आईहाले नभाग्ने भनेर अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेत सानो चित्त नबनाउन सुझाएका थिए । नेता पौडेलले कांग्रेस सत्तामा जाँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै पाँच वर्ष नै प्रतिपक्षमा बस्न सुझाएका थिए । तर, जवाफमा देउवाले आफूले भाग नखोज्ने, तर जिम्मेवारी आए नभाग्ने भन्दै सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे संकेत दिएका थिए ।
प्रचण्डले त संसद् पूनःस्थापना नहुँदै सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो कुनै दाबी नहुने भन्दै देउवालाई बनाउँदा आपत्ति नहुने बताएका थिए । उनले प्राइम टिभीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिने जनाएका थिए । आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत दाहालले परिस्थिति आफूहरुअनुकुल नै रहेको बताउँदै ढुक्क हुन नेताहरुलाई आश्वासन दिएका थिए ।
जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि भारतबाट उपचारपछि स्वदेश फर्किएलगत्तै राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेताहरुको पछिल्लो भनाई नियाँल्दाखेरि परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिकुल देखिएको छ । हुन त ओलीले पोखरा र झापामा हालै आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा आफूलाई हटाउने भए संसदमा आउन चूनौीत दिएका छन् । तर, सबै मिलेर हटाए केही वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने र फेरि चुनावमा दुई तिहाई जितेर सरकारमा आउने बताईसकेका छन् । पछिल्लो समय ओलीले परिस्थिति आफ्नो अनुकुल नदेखेपछि अहिले सबै मिलेर हटाएपनि चुनाव जितेर दुई तिहाईका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न आउने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।